UYIFUMANA NJANI ILAYISENSI YOMTSHATO WASENORTH CAROLINA KWAYE UCWANGCISE UMTSHATO WE-NC - IINGCEBISO ZOKUCWANGCISA
Eyona Iingcebiso Zokucwangcisa Ungatshata njani ngokusemthethweni eMantla Carolina kwaye ucwangcise umtshato wakho we-NC
Ungatshata njani ngokusemthethweni eMantla Carolina kwaye ucwangcise umtshato wakho we-NC
Isilumkiso seSpoiler: Inene ngokuthe ngqo. UMonisa J. Ukufota Ukuhlaziywa kwe-Aug 26, 2021
Ngeendawo zayo zokubhala zerustic nezothando, iindawo ezingasentabeni kunye neendawo zokungcebeleka ngaselunxwemeni, iNorth Carolina yindawo efanelekileyo yomtshato wamaphupha. Phambi kokuba uthi 'Ndiza kwenza,' nangona kunjalo, kukho into enye ongafanele uyilibale ukujonga ezokwenza, kwaye kukufumana iphepha lomtshato . Ukuba ucwangcisa ukubopha iqhina eNyakatho Carolina, le nkqubo icacile, kodwa usafuna ukwenza umsebenzi wasekhaya kwangaphambili ukuqinisekisa ukuba uyenza ngokuchanekileyo. Ngethamsanqa, esi sikhokelo siluncedo sichaza yonke into oyifunayo malunga namanyathelo okukhusela iphepha-mvume lakho lomtshato laseNorth Carolina kwaye ubophe iqhina kurhulumente. Nje ukuba uyiqonde kakuhle le nkqubo, yiya kwiNdawo yeMarike yeKnot ukufumana iqela labathengisi beenkwenkwezi, kwaye ukuba ucinga ukutshintsha igama lakho xa ubopha iqhina funda ukuba isebenza njani na le nkqubo. Okwangoku, nangona kunjalo, nasi iskop sokufumana iphepha-mvume lakho lomtshato laseNorth Carolina.
Ungatshata njani eMantla Carolina
Ukuthi 'ndiyayenza' eMantla Carolina sisiqwenga sekhekhe, ukuba nje uyazi ukuba ulindele ntoni. Qala apha kuyo yonke into oyifunayo ngokuqinisekileyo ukuba ucinga ngokutshata eNorth Carolina.
Ngaba likho ixesha lokulinda ukutshata eNorth Carolina?
I-North Carolina ayinalo ixesha lokulinda, oko kuthetha ukuba xa unelayisensi yakho yomtshato ungawubamba umsitho womtshato wakho ngoko nangoko ukuba uyafuna.
Zithini iimfuno zomthetho zokutshata eNorth Carolina?
Zonke iziqinisekiso zomtshato kwiphondo laseNorth Carolina ziqikelelekile: Omabini la maqela akanakuba sele etshatile, kufanelekile ukuba abe semthethweni ngokusemthethweni, kufuneka abe neminyaka eli-18 ubuncinci, kwaye akanakusondelelana. Abancinci abaneminyaka eli-16 neli-17 banokutshata ngemvume ebhaliweyo yomzali okanye ingxelo ebhaliweyo ebhaliweyo evela kumgcini osemthethweni.
izipho zodade wabo
Yintoni ethathelwa ingqalelo njengomtshato oqhelekileyo emtshatweni eNorth Carolina?
INorth Carolina ayiboneleli ngemitshato yomthetho oqhelekileyo.
Ilayisensi Yomtshato waseNorth Carolina 101
Ngaba ukulungele ukuyenza ibe semthethweni? Kuya kufuneka ufumane iphepha-mvume lakho lomtshato ukuze umanyano lwakho lusemthethweni. Qiniseka ukuba uyifumene ilayisensi yakho yomtshato ngaphambi komsitho womtshato, kodwa ungayenzi kwangoko, njengoko iilayisensi zomtshato eNorth Carolina ziphelelwa emva kweentsuku ezingama-60 ukuba azisetyenziswanga. Nazi ezinye ii-FAQ ezibalulekileyo onokuzibuza ngazo:
Yintoni oyifunayo ukuze ufumane ilayisensi yomtshato eNorth Carolina?
EMantla Carolina, uza kufumana iphepha-mvume lakho lomtshato kwiRejista yeeTayitile zedolophu yakho. Jonga iofisi yakho yendawo ukuze ubone ukuba kuya kufuneka ungene buqu okanye ukuba inkqubo inokwenziwa kwi-intanethi, nokuba ungangena na okanye uya kufuna ukucwangcisa idinga.
Ukufumana iphepha-mvume lakho kuya kufuneka uhlawule umrhumo kwaye ugcwalise amaphepha ngolwazi njengamagama akho asemthethweni apheleleyo, iminyaka, idilesi yokuhlala, idilesi yokuthumela kunye neNombolo yoKhuseleko lweNtlalo. Uyacelwa kwakhona ukuba unikezele ngobungqina beminyaka yobudala kunye nesatifikethi sokuzalwa, ipasipoti okanye enye indlela yesazisi sefoto sikarhulumente njengephepha-mvume lokuqhuba. Abafakizicelo abaqhawule umtshato okanye abo baphulukene neqabane, usenokucelwa ukuba ubonelele ngobungqina boqhawulo-mtshato okanye lokufa kunye nekopi eqinisekisiweyo yomyalelo woqhawulo-mtshato okanye ikopi eqinisekisiweyo yesatifikethi sokufa seqabane lakho langaphambili.
Kuya kufuneka ujonge kwirejista yengingqi yakho yerejista yezigqibo ngayo nayiphi na into eyongezelelekileyo ekufuneka uyazi ngenxa yokuba eminye imigaqo ngaphakathi eNorth Carolina iyahluka ngokommandla. Umzekelo, eMecklenburg County, abafaki zicelo abaphakathi kweminyaka eli-18 nama-21 ubudala kufuneka banikeze ikopi eqinisekisiweyo yesatifikethi sabo sokuzalwa ukuze bafumane ilayisensi yomtshato.
Ixabisa ntoni ilayisensi yomtshato waseNorth Carolina?
Umrhumo welayisensi yomtshato eNorth Carolina yi-60 yeedola, oya kuthi ufune ukuyihlawula kwirejista yezithili zakho ngekhadi letyala okanye ikhadi lebhanki.
Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana ilayisensi yomtshato eNorth Carolina?
Inkqubo yokwenza isicelo akufuneki ithathe ixesha elide kwaye uya kuphuma kunye nelayisensi yakho kwangolo suku. Lungiselela ukunikezela imizuzu engama-30 ukuya kweyure utyelelo lwakho kwiRejista yeOfisi yeZivumelwano.
Ngaba ungasifaka isicelo selayisensi yomtshato kwi-Intanethi eNorth Carolina?
Imimandla eliqela eMantla Carolina, njenge Mecklenburg kwaye Vuka Amacandelo, anika izibini amandla okugcwalisa isicelo selayisensi yomtshato kwi-Intanethi ngaphambi kokundwendwela iRejista yeOfisi yamaTayitile ukugqibezela inkqubo buqu. Ukuba indawo yakho ibonelela ngenkqubo yesicelo esikwi-Intanethi, ukuyisebenzisa kuya kwenza ukuba utyelelo lwakho lomntu buye kwangoko.
umtshato ngokuhlala kunye kunye nokulunga
Uyifumana njani ikopi yelayisensi yomtshato waseNorth Carolina?
Ukufumana ikopi yelayisensi yakho yomtshato kulula. Kuxabisa i-10 leedola ukufumana ikopi eqinisekisiweyo yelayisensi yakho yomtshato kuninzi lwaseNorth Carolina, onokuyifumana kwirejista yakho yengingqi yezobugcisa emva umphathi wakho Utyikitye kwaye usibuyisile isiqinisekiso somtshato wakho emva komsitho. Ngokwesiqhelo unokucela ikopi yelayisensi yakho yomtshato kwirejista yakho yezithili, ngeposi, ngomnxeba okanye ngobuqu.
Uyicwangcisa njani iNyakatho yeKarolina umtshato
Ngoku ukuba ufumene ukuqonda okuhle kwicala lezinto, lixesha lokuba ucwangcise umbhiyozo wakho. Nayo yonke enye into ekufuneka uyazi malunga nokutshata kwakho eNorth Carolina.
Izixeko ezahlukileyo kunye neeNdawo zokuThathela ingqalelo uMtshato waseNorth Carolina
INorth Carolina ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuphefumla, ukusuka kunxweme lweAtlantic nakwiziqithi zeOuter Banks ukuya kwiinduli ezijikelezayo zommandla wePiedmont North North ukuya kumda weentaba osentshona welizwe. Imimangaliso yendalo entle isebenza njengemvelaphi entle yomtshato kwimimandla nganye yejoloji, kubandakanya neJennette's Pier ejonge ulwandle kwiNags Head, kunye neeNtaba zeBlue Ridge ezijikeleze iMilgace yeFama iMcGuire kwintshona yelizwe. Uyakufumana iitoni zemidlalo yomtshato egqibeleleyo kwimimandla emikhulu yaseNorth Carolina enje ngeMerrimon-Wynne House eRaleigh, iDuke Mansion eCharlotte kunye neBiltmore Estate eyaziwayo eAsheville.
Yintoni ekufuneka ujonge kuyo kwindawo yomtshato waseNorth Carolina
Njengoko uqala ukukhangela indawo yakho yomtshato, kukho izinto ezimbalwa eziphambili ekufuneka uzikhumbule. Qiniseka ukuba ubuza indawo ezinokubakho zomtshato ukuba zibandakanyiwe na kwiphakeji nganye, kwaye ugcine umkhondo wokuba ngabaphi abanye abathengisi onokufuna ukuba baqeshe ukuze umbono wakho uphile. Okwesibini, thatha isigqibo sokuba yeyiphi na indlela yakho yomtshato kwaye uyigcine engqondweni njengoko ujonga indawo ophupha kuyo. Urhulumente unendawo eyahlukeneyo yokwamkela iindwendwe onokukhetha kuzo, kodwa indawo entle esefama kumbindi weNyakatho Carolina ibonelela nge-vibe eyahlukileyo kunaleyo intle, indawo yemyuziyam yasezidolophini. Okokugqibela, ukuba ucwangcisa ukuba nenani elikhulu leendwendwe ezingaphandle kwedolophu, qiniseka ukuba indawo yakho yomtshato iyavakala kubahambi abanokudinga ukubhabha kuloo ndawo kwaye bahlale ubusuku.
Indlela yokufumana abathengisi boMtshato baseNorth Carolina
Sele uyifumene indawo yokuphupha? Emva koko ulungele ukuqokelela iqela labathengisi bomtshato ababulalayo. Ukukhangela kwimithombo yeendaba kwezentlalo okanye ukuqesha umcwangcisi womtshato ukukukhokela ziindlela ezimbini ezilungileyo zokufumana iiflorist ezinkulu, abafoti, ii-DJs kunye nokunye. Unokukhangela kwakhona kwiNdawo yeMarike yeKnot, enikezela ngesiseko sedatha esigcwele ziingcali zomtshato zase-top-tier.
izipho zomtshato ezivela kumtshakazi nomyeni
AmaXesha aBalaseleyo oNyaka ukuba abe noMtshato waseNorth Carolina kwimozulu entle
Imozulu eNyakatho Carolina iyahluka kancinci kuxhomekeke kummandla, kunye neemeko ezinomswakama ezinqabileyo kunxweme kunye nemozulu epholileyo yelizwekazi phakathi kweentaba. Ngelixa kufuneka ugcine okwahlukileyo engqondweni xa ukhetha ukuba yeyiphi inyanga yokubopha iqhina, qaphela ukuba imitshato yokuwa phakathi kwexesha elide iyathandwa ngaphakathi kurhulumente kwaye ngesizathu esihle. Ekwindla kuzisa ubushushu obufudumeleyo kunye nomngcipheko ophantsi wezaqhwithi ezinzima ezinokuthi ngamanye amaxesha zibethe amanxweme ngasekupheleni kwehlobo nasekuqaleni kokuwa, kunye neenkanyamba ezinokubakho kumbindi wombuso wasePiedmont entwasahlobo nasehlotyeni. Ngapha koko, ungathembela kumagqabi awileyo aqala ukuthatha ilizwe ngo-Okthobha nango-Novemba ukwenzela indawo entle yomtshato, ngakumbi kwingingqi yeNtaba yeBlue Ridge.
iikhabhathi zasekhitshini zimnyama
zizicatshulwa zam zothando
iingoma zelizwe zamatheko omtshato
izimvo zesipho kumamazala
iintlobo ezahlukeneyo zemvula